Maamul loo Samaynayo Bartamaha Somalia
Dalka Britian ayaa looga dhawaaqay maamul loo samaynayo bartamaha Somalia.
Magaalada Leicester ee ku taalla badhtamaha wadanka Britain waxaa lagu soo gaba-gabeeyay shir socday muddo sadex maalmood ah oo ay halkaasi ku lahaayeen qurba-joog ka kala yimi dalal kala duwan oo kana soo jeedda mid ka mid ah beelaha dega badhtamaha iyo koonfurta Somalia.
Waxaanay halkaasi kaga dhawaaqeen in ay samaynayaan maamul la magac baxay Somali Central State amaba dawlad goboleedka badhtamaha Somalia,oo loo samynayo qaar ka mid ah deegaamada gobolada dhexe ee Somalia.
Waxaana isla shirkaasi lagaga dhawaaqay guddi ka kooban 57 xubnood oo u gogol xaadhi doona dhismaha dawlad goboleedka badhtamaha Somalia.
Guddigaasi waxaa gudoomiye u ah Mohamed Xaashi Abdi .
Guddigaasi waxaa gudoomiye u ah Mohamed Xaashi Abdi , wariyaha VOAda ee qaaradda Yurub Cabdisalaan Hereri ayaa waraysi la yeeshay guddoomiyaha.